Maamulka degmada buula burde ee goboloka Hiiraan oo kulan looga hadlayo Amniga kuyeeshey Degmadaasi – Radio Baidoa
Maamulka degmada buula burde ee goboloka Hiiraan oo kulan looga hadlayo Amniga kuyeeshey Degmadaasi
Degmada Buulo-Burde ee Gobolka Hiiraan waxaa kulan xasaasi ah ku yeeshay,saraakiisha Ciidamada dowladda,kuwa AMISOM, Maamulka degmada iyo Odayaasha Dhaqanka degmadaas,kaas oo looga hadlayey dhinaca Amniga.
Kulanka ayaa waxaa sidoo kale ka qeyb-galay wasiirka Arrimaha Gudaha Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle,waxaana kulanka uu ahaa mid diidarada lagu saarayey sidi la isugu furi lahaa wadooyinka ay go’doomiyeen Al-Shabaab.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa sheegay in degmada Buulo Burde ay kamid tahay degmooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka Hiiraan,isla markaana la xoojin doono.
Taliyaha Ururka 41aad Guutada 5aad qeybta 27aad Dhame Cabduqaadir Cali Nuur ayaa sheegay in Al-Shabaab laga saari doono deegaannada hoos yimaada degmada Buulo-Burde ee gobolka Hiiraan si go’doonka looga qaado,isaga oo Madaxda Dowladda ugu baaqay in la qalabeeyo Kooxda Macaawiisley oo dagaal kula jira Al-Shabaab.
Guddiga doorashada Madaxweynaha Galmudug oo kulankoodii ugu horeeyey maanta Yeeshey
Macallimiin badan oo isaga tagay Wajeer kaddib weeraradii Al-Shabaab